Indlu ehonjiswe ngendlela ekhethekileyo - I-Airbnb
Indlu ehonjiswe ngendlela ekhethekileyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPiia
Indlu entle enamagumbi okulala anezinto eziyimfihlo, igadi enkulu kunye noyilo lobugcisa (olwenziwe ndim), kodwa isembindini welali. Iindawo zokumisa izithuthi zikawonke-wonke kunye nevenkile yokutya esitratweni. Indawo entle yokuphumla yezibini, abantu abathanda ukuhamba bodwa, iintsapho ezinabantwana kunye/okanye abahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya). Ikwayindawo entle yokuhlala uze uthathe uhambo lwemini oluya eSaaremaa, ePärnu, eHaapsalu okanye eTallinn.
Njengoko ndihlala apha ngamanye amaxesha ayiyo ihotele, ngoko ungayilungiseleli loo nto.
Uyilo olukhethekileyo nolwezobugcisa (olwenziwe ndim).
Yiofisi eyayikade iklabhu ye-hotbike ekwindawo engasemva kwevenkile yezinto zakudala. Kwivenkile ungafumana izinto ezininzi ezikhethekileyo kuquka ii-suvenires endizenzele zona. Kwezinye iintsuku zehlobo Igalari yam yobuGcisa ivulekile kwiindwendwe.
Njengoko ndihlala apha ayiyo ihotele, ngoko ungayilungiseleli loo nto. Iza kucoceka, kodwa ingabulawa iintsholongwane. Likhaya, kodwa wamkelekile ukuba ulithathe ngokuba likhaya lakho iintsuku ezimbalwa!
4.72 · Izimvo eziyi-130
Indlu ngokwayo ikwisitrato esiyintloko saseLihula. Isitrato sinezakhiwo ezininzi zembali ibe uninzi lwazo luneebhodi zenkcazelo ngembali yazo.
IMatsalu National Park enemyuziyam ikufutshane neekhilomitha eziyi-3.
I-Matsalu, eyakhiwe ngeekhilomitha ezingaphezu kweziyi-400, eyona nto iphambili yaziwa ngokuba yenye yezona ndawo zihamba phambili zokubukela iintaka zaseYurophu.
I-Matsalu yindawo yasemaphandleni nehlala kuyo iholide, apha ungafumana iindlela zokunyuka intaba eziqhelekileyo nezinzima. Abatyeleli bangabuka imeko ekhethekileyo yeMatsalu National Park uhamba ngeenyawo, ngebhayisekile okanye ngesikhephe.
Umbuki zindwendwe ngu- Piia
Ngokuqinisekileyo ndinganceda ukuba ndinexesha ndize ndiphendule imibuzo ukuba ndiyakwazi. Okanye mhlawumbi ndiyazi ukuba ndiza kubuza phi